Mubatanidzwa weApple naNike yakasimba Push yeApple Watch nhepfenyuro 2 | Ndinobva mac
Apple neNike mubatanidzwa yakasimba Push yeApple Watch Series 2
Chimwe chezvishamiso chatakawana mune yekupedzisira Apple kiyi yakakosha yaive iyo Kubatana kwaNike pane Apple Watch yakateedzana 2 modhi. Zvakadaro, kubatana uku hakusi kutsva, sezvo vaive mumwe wemapiyona mukugadzira app yeIOS inokwanisa kutaurirana nemidziyo yechiratidzo chavo.
Kune rimwe divi, iri bhuku kuburitsa chigadzirwa "chemasanganiswa" apo chimwe chikamu chiri Apple Watch uye tambo yakajairika dhizaini yeNike. A priori, zvingaite senge kumwe kubatirana, kunge tambo dzeHermés, asi kana ukazvitarisa nenzira, uyu mubatanidzwa unoteedzera zvakakura kwazvo mabhenefiti kumakambani maviri aya.
Kuti tizive izvi, ngatifungei nezvekushandisa kwatinoita kwekutanga Apple Watch: Clock, kubvunza kwema generic application (nguva, mameseji, chimwe chiyeuchidzo kana ziviso), hutano hweapp, nezvimwe. Kune rimwe divi, nekuda kwekukanganisa kweiyo yekutanga vhezheni, chishandiso ichi chakaraswa kuti chiitise muviri nemavara makuru sekumhanya, kuchovha bhasikoro, kushambira, nezvimwe. Zvikonzero zviri pachena: kushomeka kweGPS uye tambo iri nyore kwazvo kumitambo, inotsiva iyo Apple Watch ichienzaniswa nevakwikwidzi vehukuru hwaFitbit kana zvakafanana.
Asi kukosha kupi kunounzwa nekubatana uku? iyo Apple Watch yakaiswa mukati mehuremu hwemaawa emagetsi, anokwanisa kubatanidza kune chishandiso kuti chibatanidze Kune rimwe divi, akateedzana 2 pamwechete neNike tambo, inoshandura Apple wachi ive yechokwadi Weareable: Kutenda kune iyo GPS iwe unogona kuita mitambo zvakanyanya uye iyo isingaite kusakwana inokutendera iwe kuti uite mitambo yemvura. Uye zvakare, iyo perforated bracelet inovandudza dikita reganda uye kubvisa kubuda ziya. Uye pakupedzisira chikuva Nike + Mhanya Kirabhu, Iye mubatsiri akakwana wechiitiko chakazara chevatambi.
Uye zvakare, iwo musika wakazvinzwisisa nenzira iyoyo. Kubva panguva yakafumurwa Apple Watch Nike +, zvikamu zveFitbit zvakadzikira. Naizvozvo, zvese zvinoita kunge zvinoratidza izvo kubatana kweApple neNike kuri pano kuzogara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple neNike mubatanidzwa yakasimba Push yeApple Watch Series 2
Locko - password maneja uye faira vault, yemahara kwenguva shoma
Tim Cook anoyeuka Steve Jobs mutsamba kune vashandi